ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း၏ သားကို နေရွှေသွေးအောင် လူလွှတ်၍ ရိုက်ခိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း၏ သားကို နေရွှေသွေးအောင် လူလွှတ်၍ ရိုက်ခိုင်း
Posted by စနေ on Dec 21, 2010 in News |7comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏မြေး နေရွှေသွေးအောင်(ဖိုးလပြည့်) က ၎င်း၏ နောက်လိုက်များအား စေလွှတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ၀င်းလှိုင်၏သား ၀င်းထွေးလှိုင်ကို ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်စေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ခံရသည့် ၀င်းထွေးလှိုင်မှာ အသက် ၃၁ နှစ်ခန့်ရှိ ဂေါက်သီး ကစားသမား တဦးဖြစ်ပြီး ကြေးစား ဂေါက်သီး ကစားသမားအဖွဲ့ PGA (Professional Golfers’ Association) အသိအမှတ်ပြုခံရသူ တဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေ ဖြစ်တဲ့ခေတ်ပါလား ဟရို့ … နည်းနည်းနောနော ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော် ။ ကျိန်စာဝလေ လှလေဆိုတာ ဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ် ။
where is ‘ Nga Mite Thar’….. i want to punish him …… call him infront of me ……. :=
Just kidding Kyauk par dal Kyauk par dal
အလကားပါ အနောက်မှာ သခင်ရှိလို့ အမြီးနန့် ဟောင်တဲ့ခွေးလိုပဲ…. တစ်ယောက်ချင်း one by one ဆိုရင်… အသံတောင် ထွက်ရဲမယ့်ကောင် မဟုတ်ဖူး…
အမှိုက်ကစပြီး ပြသဒ်မီးလောင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိတယ်လေ။